Khariidadaha Google ayaa tirtiray 3 milyan oo qaab ganacsi oo been abuur ah 2018 | Wararka IPhone
Khariidadaha Google ayaa tirtiray 3 milyan oo xog ganacsi oo been abuur ah sanadkii 2018
Faa'iidada dhufto ee khariidadaha Maanta waa taas marka la jaleeco waxaan heli karnaa macluumaad badan. Dhinac, aragtiyaha kala duwan ee khariiddada: dayax gacmeed, isugeyn ama heer. Dhinaca kale, waxaan arki karnaa astaamaha, fikradaha iyo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shirkadaha ka jira goobta aan booqanayno, taas oo nooga dhigeysa waqti inaan ku raadinno internetka kale.
Dhibaatadu waxay jirtaa markii astaamaha shirkadahaas aan la tashano ay yihiin kuwo dhalaalaya oo loo abuuray in lagu khiyaaneeyo oo lagu khiyaaneeyo Google ayaa xaqiijisay inay ka tirtirtay 3 milyan oo astaamo ganacsi oo been abuur ah khariidadaha Google sanadkii 2018, kuwaas oo 85% aysan wax xiriir ah la lahayn isticmaale kasta. Dhinacani muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay adeegyada khariidada, maxaa yeelay adeegsadayaal badan ayaa ku hawlanaa khiyaanooyin.
Shirkadaha been abuurka ah iyo waxqabadka Khariidadaha Google
In ballaaran ku dhawaaqid riix Google wuxuu sharraxay wax kasta oo la xiriira mowduucan, isagoo ka sarreeya dhammaan waa maxay tallaabada Google markay ogaadaan astaan ​​been abuur ah. Intaa waxaa sii dheer, waxay xaqiijiyeen in kontaroolada ay sii kordhayaan oo ay adag yihiin oo ay yar yihiin tilmaamaha marin habaabinta, taas oo macnaheedu yahay amniga iyo kalsoonida dhinaca isticmaalayaasha.
Khariidadaha Google waxay ka caawisaa dadka inay sahamiyaan, maraan, sameeyaan shaqadooda guri, iyo inbadan oo dad ah ayaa isticmaalaya Khariidadaha Google si ay u helaan ganacsiyo maxalli ah. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan ku darnay in ka badan 200 milyan oo meelood khariidadaha Google bil walbana waxaan ku xirnaa dadka leh ganacsiyada in ka badan sagaal bilyan oo jeer, oo ay ku jiraan in ka badan hal bilyan oo taleefan iyo saddex bilyan oo codsiyo ah.
Macluumaadka ay bixiyeen astaamaha shirkaddu waxay muhiim u yihiin helitaanka meelaha ay adeegsadayaashu u safraan maalinba maalinta ka dambaysa. Waan hubin karnaa saacadaha, lambarrada taleefannada, cinwaanka, menusyada ama waraaqaha, dabcan, waxaan u kuurgali karnaa dhaleeceynta ay isticmaaleyaasha kale u geysteen goobta la aadayo ama, haddii taa lidkeed ay xun yihiin, beddelaan meelaha. Kuwani waa Google My Business.
Jiritaanka astaamaha been abuurka ah ee Khariidadaha Google ayaa saameeyay kumanaan dad ah sanadkii la soo dhaafay, sida lagu soo wariyay Wall Street Journal. Isticmaalayaasha la xiriiray shirkadaha mahadnaqa adeegga khariiddada oo lagu soo oogay lacag labanlaab ah inta la sheegay, iwm. Ujeeddada ugu weyni waa xog ururi ka dibna ku iibiso internetka. Tani, in kasta oo ay noogu muuqan karto wax nagu cusub, waa ganacsi khadka tooska ah ka socday tobanaan sano, laakiin ku yaal meheradaha kale.
In kasta oo astaamaha ganacsi ee been abuurka ah ay ka kooban yihiin boqolley guud oo ah meheradaha guud ee ganacsiga Google, haddana kuwa wax khiyaameeya ganacsiga maxalliga ah ayaa qodax ku ahaa dhinaca internetka muddo ka badan toban sano. Xitaa way jireen markii liisaska ganacsiga la daabacay, la xiray, oo la galiyay albaabkaaga.
Google waxay nagu siineysaa warsaxaafadeedkeeda xog xiiso leh oo ku saabsan mowduuca aan ka hadlayno:
Waxaan baabi'ineynaa in ka badan 3 malyan oo ganacsi oo been abuur ah, iyo in kabadan boqolkiiba 90 ee astaamahaas ganacsi waa la tirtiray kahor inta uusan isticmaaluhu fiirin astaanta.
Nidaamyadeena gudaha ayaa mas'uul ka ahaa in ka badan boqolkiiba 85 tirtiritaanadan.
Isticmaalayaasha ayaa noo sheegay in ka badan 250,000 oo ka mid ah astaamaha ganacsi ee beenta ah ee aan ka saarnay.
Waxaan curyaaminnay in ka badan 150,000 koontooyinka isticmaalayaasha ee loo arkay inay yihiin kuwo xadgudub ah, oo ah boqolkiiba 50 koror ka yimid 2017.
Waan arki doonaa haddii Apple uu fiiro gaar ah u leeyahay dhacdooyinkan iyo waa laga fogaan karaa, waxaas oo dhan waxaa ka sareysa, cusbooneysiin cusub oo weyn oo loogu talagalay iOS 13 oo leh Khariidadaha Apple iyo Eeg Hareeraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Khariidadaha Google ayaa tirtiray 3 milyan oo xog ganacsi oo been abuur ah sanadkii 2018